Al-shabab oo toogatay Askari Uganda u dhashay oo ay heysteen | Baydhabo Online
Al-shabab oo toogatay Askari Uganda u dhashay oo ay heysteen
Warbaahinta Xarakada Al Shabaab, ayaa baahisay in la toogtay mid ka mid ah askarta reer Uganda, ee gacanta ugu jira xarakada Al-shabaab ee Somaliya.
Askariga la toogtay oo lagu magacaabi jiray Masassa M.Y, ayaa waxaa uu ka tirsanaa Ciidanka Militariga Uganda, ee qaybta ka ah Amisom, waxaana ay Shabaabku ku qabteen weerar ballaaran, oo 1-dii bishii September ee sanadkii 2015 kula wareegeen xerada Ciidamada Amisom, ku leeyihiin Degmada Janaale ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Askarigan, ayaa mar sii horeysay farriin uu ku dalbanaayay in noloshiisa la badbaadiyo u jeediyay Madaxweyne Yoweri Museveni iyo shacabka reer Uganda, iyadoona uu ka codsaday in ay ka shaqeeyan, sidii uu kaga soo bixi lahaa gacanta Al Shabaab.
Farriintaasi oo muuqaal ahayd, ayuu Dowladda Uganda kaga codsaday in ay aqbasho dalabka Al Shabaab, oo ah in Uganda ay askarteeda kala baxdo Gobolada Koonfureed Somaliya.
Al Shabaab oo xalay soo bandhigtay muuqaal sagaal daqiiqo ah, ayaa waxaa ka soo muuqday askarigan, iyadoo aanu markaan wax codsi ah u jeedin Xukuumadda Kampala, sababo ku aadan iyadoo aan laga jawaabin codsigiisii hore.
Ha yeeshee Ciidanka Uganda ee la qorsheynayo in bedel ahaanta loo keeno Somaliya, ayaa wuxuu u jeediyay in ay ka fekeran imaanshahooda Somaliya. Waxaa uu xusay in Somaliya ay kaga soo horeyso xaalad khatar ah.
Muuqaalka ay xalay soo bandhigtay Al Shabaab, ayaa waxaa qaybta ugu dambeysa lagu arkaya askariga reer Uganda, oo madaxa uu ka tooganayo nin ka tirsan maleeshiyada Shabaab